Ogaden News Agency (ONA) – Isu-Duwaha Jaaliyadaha Pacific-ga mudane Adan Dakhare oo Khadka Is-gaadhsiinta Kula Kulmay Hawl-wadeenada Jaaliyadaha Pacific
Waxaa Shir muhiim ah ku kulmay hawlwadeenada jaaliyaadka S.Ogaadeeniya ee Pacific-ga. Shirkan oo arima badan looga wada-hadlay ayaa waxaa shir-gudoominayay Isu-duwaha jaaliyaadka Pacific-ga halgame Adan Ibraahim (Adan dhakhare). Shirka oo sidii loogu talagalay u qabsoomay ayaa lagu kala war qaatay. Waxaa ka mid aha warbixinada la’is dhaafsaday habsami u socodkooda hawlaha jaaliyaadka, xaalada dalka Ogaadeniya uu marayo, geedi socoka halganka.
Intaa ka dib waxaa laga arinsaday u diyaar garoo mudaaharaad balaadhan oo jaaliyadaha S.Ogaadeeniya ay doonayaan inay ku qabtaan magaalada Brisbane caasimada gobalka Queens Land oo uu ka dhacayo shir wayn caalamiya oy ka soo qayb galayaan wufuud badan oo caalamka siiba wadamada loo yaqaano G20. Jaaliyada oo doonaysa inay caalamka tusto tacatiyada iyo gaboodfalka uu gumaysiga Itoopiya ku hayo dhulka iyo shacabka S.Ogaadeeniya ee gumaysi diidka mintidka ah.
Xubnihii matalayay Jaaliydaha oo afkaartooda isku dhaafsaday shirka war bixinana ku kala dhagaystay ayaa isku afgartay in la sii xoojiyo halganka ay JWXO hormuudka ka tahay ee ka socda dalka Ogaadeeniya. Jaaliyadaha S.Ogaadeeniya ee Pacific-ga ooy caado u tahay isgarab taaga dadkooda gumaysigu hagaasiyay ayaa wacad ku qaaday inay dadaalka halkii kasii wadaan sidii heeryada gumaysigan gabalkiisu dhacay laysaga dulqaadi laahaa.
Gabagadii shirka oo hadal dardaanan iyo dhiirin galin uu ka soo jeediyay Isu-duwaha jaaliyadaha Pacific-ga halgame Adan dhakhare ayaa u hambalyeeyay jaaliyadaha feejignaanta iyo xilkasnimada wadaniyadu ku dheehan tahay ay hawlahooda u fushadaan kula dardaarmay inay sii Laban laabaan u hiilinta dadkooda iyo dalkooda wuxuuna shirku ku soo dhamaaday jawi farxad iyo is afgarad.